မြန်မာနိုင်ငံက မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေရှာသည့် အခိုင်းခံ ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်များ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြန်မာပြည်၏ မွတ်စ်လင်မ် ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှု နှင့် လူမြင်မခံ အင်အားစုများ (By Francis Wade)
‘Indians Should Watch Out in Myanmar’ »
မြန်မာနိုင်ငံက မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေရှာသည့် အခိုင်းခံ ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်များ
အောက်တိုဘာ၊ ၁၉ M-Media ဘာသာပြန်ဆိုသူ- မင်းသိုက်
မောင်းတော၊ မြန်မာ (AP)။ ။အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်သည် တောင်ပေါ်သို့ ကျောက်တုံးများအပြည့်ပါသည့်ပုံးများကို သယ်ဆောင်ကာ ကြိုးစားပမ်းစားတက်နေရသည်။ သူ့သူငယ်ချင်းများအရှေ့တွင်တော့ အားခဲမာန်တင်းထားသော်လည်း သူ့မျက်ဝန်းတွင်တော့ မျက်ရည်စများ စွတ်စိုနေသည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၌ ယားယံမှုကိုခံစားနေရပြီး၊ သူ့ထံအဖျားဝင်နေကြောင်း နှင့် အလေးအပင်များသယ်ထမ်းရသဖြင့် မူးဝေနေကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“ ဒီအဖြစ်ကို ကျွန်တော် ရွံမုန်းပါတယ် ” ဟု အဏ္ဏ၀ါ စာဒတ် (Anwar Sardad) က ဆိုသည်။ သူသည် သူ့မိသားစုအား ထောက်ပံ့ရမည်ဆိုသည်ကို သိပါ၏။ သို့ပေမင့် အစိုးရ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ထက် အခြားနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ကိုင်မှုကိုသာ လိုလားလျက်ရှိပါသည်။ “ ကျွန်တော်သာ မွတ်စ်လင်မ် မဟုတ်ခဲ့ရင် ဒီလိုမျိုးဘ၀ကို ဖြတ်သန်းရမှာမဟုတ်ဘူး ” ဟု သူက ဆက်ပြောပြသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကြီးစိုးသည့် လူဦးရေ သန်း ၆၀ ရှိ နိုင်ငံအတွင်း ဆယ်စုနှစ်များစွာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအား အဆုံးသတ်မှုအတွက် ချီးမွှမ်းခံခဲ့ရသော်လည်း အဏ္ဏ၀ါကဲ့သို့ ရာထောင်ချီသည့် ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်များသည် တိုင်းပြည်ထဲတွင် မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့လျက်ရှိသည်။
မွတ်စ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် အချိန်အတော်ကြာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ခံခဲ့ရပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုများက ကမ္ဘာအတွင် အဆိုးဝါးဆုံးဟု ဆိုစမှတ်ပြုထားကြသည်။ သို့သော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်သည် နိုင်ငံ၏ ရိုဟင်ဂျာ ၁ သန်းတွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ နေထိုင်နေသောဒေသဖြစ်သည်။ ယခုသော် ကလေးငယ်များအတွက် ပညာရေး၊ အစာရေစာ နှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလထက်ပင် ဆိုးရွားသောအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေ၏။ တစ်နေ့လျှင် တစ်ဒေါ်လာသာရရှိရေးအတွက် အလုပ်ကြမ်းလုပ်ကိုင်ရန်မှအပ သူတို့ထံ မည်သည့်ရွေးချယ်မှုမျှ မရှိပေ။
နိုင်ငံခြားသားသတင်းထောက်များ လုံးဝမရောက်ဖူးသေးသောနေရာသို့ The Associated Press (AP သတင်းဌာန) မှ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာများအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းသော အခါ ဒေသခံအာဏာပိုင်များသည် သင်္ကာမကင်းစွာဖြင့် တင်းတင်းမာမာ တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ရဲများနှင့်တွေ့ဆုံရန် ခေါ်ယူခံရသည်။ သတင်းထောက်များမှာ ထပ်ကြပ်မကွာ နောက်ယောင်ခံလိုက်ခြင်းခံရသည်။ ၄င်းအပြင် ကလေးငယ်များ အပါအ၀င် တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးသောသူများကိုလည်း ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်ကြလေသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၅ လကတည်းက လူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုဖြင့် ဖရိုဖရဲဖြစ်ခဲ့သော နိုင်ငံအတွင်း ဤနေရာသည် မွတ်စ်လင်မ် အကြမ်းဖက်သူများက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်နေရာဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် အဖြစ်အပျက်များကို ပြောင်းပြန်ဖော်ကျူးထားသည့် အဓိပ္ပာယ်ထွက်နေကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြသည်။ ယခုနေရာသည် နိုင်ငံအ၀ှန်းသေဆုံးသူ ၂၄၀ အတွင်းမှ ၁၀ ယောက်သာ သေဆုံးခဲ့သောနေရာဖြစ်သော်လည်း လူမျိုးတစ်စုလုံးမှာ ခရီးသွားလာခွင့်ကို တင်းကြပ်ခြင်းများ၊ အခြားသီးသန့်မူဝါဒများအားဖြင့် အပြစ်ပေးခံနေရသည့် တစ်ခုတည်းသောဒေသဖြစ်သည်။
မဒ်ရဆာ (Madrassas) ဟုခေါ်သော မွတ်စ်လမ်ကျောင်းများသည် အပိတ်ခံထားရပြီး ကလေးငယ်များသည် အစိုးရကျောင်းများအတွင်းသို့ တွန်းပို့ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ပြည်နယ် လူဦးရေ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးရှိ ရိုဟင်ဂျာတို့မှာ မိမိနားမလည်သည့် ဘာသာစကားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆရာများဖြင့် သင်ကြားစေခြင်းခံရသည်။
ယမန်နှစ်အကြမ်းဖက်မှု၌ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးအသတ်ခံရသည့် ဘဂုဏ်းနား ဆိုသော ရွာငယ်လေးတွင် သေးငယ်သော အစိုးရကျောင်း၌ လက်ခံထားသော ကလေးငယ်ဦးရေ ၁၂၅၀ နီးပါးရှိသည်။ မူကြိုကျောင်းသားအရွယ် မှ ၈တန်းကျောင်းသားအရွယ်ထိ ထိုကျောင်းလေးအတွင်း၌ ကျောင်းသားများအကြား လမ်းလျှောက်ဖို့ပင် မလွယ်ကူလောက်အောင် ပြည့်ကျပ်နေခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဆရာများက သင်ပုန်းပေါ်မှာ စာတွေအများကြီးတော့ရေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို အဲဒါတွေ ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာတော့ မသင်ပေးကြဘူး။ ဒီလိုကျောင်းမျိုးမှာ သင်ကြားတတ်မြောက်ဖို့ အရမ်းကိုခက်ခဲပါတယ် ” ဟု အသက် ၈ နှစ် အရွယ် အဏ္ဏ၀ါ စဂျခ် (Anwar Sjak) က ဆိုသည်။
ကျောင်းထဲတွင် အစိုးရခန့်ဆရာ ၁၁ ယောက်သာရှိပြီး၊ ဆရာတစ်ဦးလျှင် ကလေးငယ် ၁၁၄ ယောက်အား သင်ကြားရသည်။ သတင်းထောက်များ ကျောင်းသို့သွားရောက်လေ့လာသောနေ့တွင် ၄င်းတို့သည် ကျောင်း၏ ပုံမှန်အခြေအနေအား မပြသခဲ့ကြပေ။
ရိုဟင်ဂျာစောင့်ရှောက်ရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ကျောင်းအတွင်း ငြိမ်သက်မှုရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းပေးနေကြပြီး၊ လူတစ်ဦးသည် လက်ထဲတွင်ကြိမ်လုံးကိုင်၍ အမှိုက်များပြည့်နေသည့် ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်အား ရိုက်ကာ ဆိတ်ငြိမ်စွာနေကြစေသည်။ ကလေးအနည်းငယ်မျှသာ ခုံ သို့မဟုတ် စားပွဲများ ရှိကြ၏။ အတော်များများသည် အချင်းချင်း စကားပြောနေကြသလို၊ ဗလာကျင်းဖြစ်နေသော မှတ်စုစာအုပ်များကို လှန်လျောနေကြသည်။ ထို့အတူ သူတို့ကျောင်းထဲ ၀င်ရောက်လာကြသော သူစိမ်းများအား ငေးမောလျက်သာရှိနေကြသည်။
“ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကြီးလာတဲ့အခါ ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ချင်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာ တစ်စုံတစ်ယောက် နေမကောင်း ဖြစ်လာတိုင်း ဆေးရုံကိုသွားရင် ၀န်ထမ်းတွေက ကျွန်တော်တို့အပေါ် ဂရုမစိုက်ကြဘူး။ ကျွန်တော် အဲဒါကို အလွန်ခံပြင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်လို့ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက် ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ် ” ဟု တတိယတန်းကျောင်းသား အဏ္ဏ၀ါက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာများအား ဆေးကျောင်းတက်ရောက်ခွင့် မပေးချေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် တက္ကသိုလ်များ မရှိ။ ၄င်းပြင် ရိုဟင်ဂျာများအား ထိုဒေသပြင်ပ ဘယ်ကိုမှ ထွက်ခွာခွင့် မပေးသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမက ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ခြွင်းချက်အဖြစ် ရိုဟင်ဂျာတစ်ချို့အား ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေ၌ စာသင်ကြားခွင့် ခွင့်ပြုထားခြင်းသည်လည်း လွန်ခဲ့သောနှစ် သွေးချောင်းစီးမှု၏နောက် နိဋ္ဌိတံခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ကို သူတို့ စာသင်မပေးချင်ကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို (မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ချိုးနှိမ်ခေါ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့) ကုလား လို့ခေါ်ကြတယ်။ မင်းတို့ဟာ တန်းတူနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် မင်းတို့ ဘာပညာမှရှိစရာမလိုအပ်ဘူး လို့ သူတို့ကပြောလေ့ရှိပါတယ် ” ဟု ပင်လယ်ကမ်းခြေရွာလေးဖြစ်သော မြင်းလွတ်ရွာမှ ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်များအတွက် ကိုယ်ပိုင်စာသင်ခန်းလေးအား မိမိနေအိမ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသူ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် စိုယဒ် အလမ် (Soyed Alum) က ပြောပြသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ထောင်ချီသော ရိုဟင်ဂျာများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကို စွန့်လွှတ်ကာ၊ အခြားနိုင်ငံများ၌ ခိုလှုံသူဒုက္ခသည်အနေနှင့် နေထိုင်ခွင့်ရရေးမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အန္တရာယ်များသော ပင်လယ်ခရီးကို သွားကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာအများစုပါဝင်သည့် လူပေါင်း ၂၅၀,၀၀၀ ကို အဓမ္မအိုးအိမ်စွန့်စေသော မကြာသေးမှီက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ထိုသို့ပြုကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလ မုတ်သုံရာသီအကုန် ပင်လယ်ပြင်ငြိမ်သက်ချိန်စတင်သည်နှင့် အကြီးမားဆုံးစွန့်စားခန်းတစ်ခု စတင်ကြလိမ့်မည်ဟု လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများက တွက်ဆထားကြောင်း သိရသည်။
ရိုဟင်ဂျာများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ရာစုနှစ်များစွာ နေထိုင်လာခဲ့သူများဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုအခါ ယင်းနေရာတွင် နေထိုင်နေသူအချို့မှာကား အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ လတ်တစ်လော ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်လာကြသူများဟု အချို့ သမိုင်းပညာရှင်များက ဆိုသည်။ သူတို့အားလုံးမှာ နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ငြင်းပယ်ခံရသဖြင့် နိုင်ငံမဲ့လူသားများဘ၀သို့ ရောက်နေရသည်။
“ သူတို့ဟာ တရားမ၀င် ခိုးဝင်နေထိုင်သူများဖြစ်တယ် ” ဟု ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ် လှသိန်းက တင်းမာစွာပြောကြားသည်။
သူတို့ကို နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ တားမြစ်ခံရသလို၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် မပေးချေ။ မည်သည့် ရိုဟင်ဂျာကိုမှ မွေးစာရင်း မထုတ်ပေးခဲ့သည်မှာ ၁၉၉၀ နှစ်များအလယ်ပိုင်းကာလကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။ မိဘ နှစ်ပါးသည် တရားဝင်လက်ထပ်ထားခြင်းမရှိပါက သို့တည်းမဟုတ် ၄င်းတို့လူမျိုးတစ်စုတည်းပေါ်တွင်သာ ပြဋ္ဌာန်းထားသော တစ်မိသားစုတွင် ကလေး ၂ ဦးသာယူရေးမူဝါဒထက် ပိုယူပါက ယင်းရိုဟင်ဂျာ ကလေးငယ်များသည် “ ပယ်ဖျက်စာရင်း (Blacklist) ” ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသဖြင့် သူတို့အတွက် အခြေခံရပိုင်ခွင့်လေးများပင် မခံစားကြရပေ။
အာဏာပိုင်များသည် လျစ်လျူရှုပစ်ပယ်မှုမှသည် အမှန်းတရားအဆင့်သို့ ပြောင်းလဲလာကြသည်။
AP ၏ ခရီးစဉ်အား ကူညီပေးရန်အတွက် ဗဟိုအစိုးရမှ လုံခြုံရေးထည့်ပေးသူသည် ဘာလို့များ ဒီလို “ ခွေးတွေ ” နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြရတာလဲ ဟူ၍ပင် မေးမြန်းခဲ့သည်။ ရိုဟင်ဂျာမိန်းကလေးငယ်များသည် အဖွဲ့သား၏ကားမှန်များအတွင်း စောင်းငဲ့ကြည့်ရှု့ကြသောအခါ ယင်းလုံခြုံရေးပေးရန်လိုက်ပါလာသူမှ နှမချင်းမစာနာ ရုန့်ရင်းရိုင်းစိုင်းသောအသုံးအနှုန်းများဖြင့် ဆဲဆိုတုံပြန်ခဲ့သည်။
အစိုးရမှ ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်များကို ပေးအပ်သည့်အရာမှာ အလုပ်ခိုင်းစေခြင်း တစ်ခုသာ ရှိနေ၏။ သူတို့သည် အသက် ၁၀ နှစ်မျှသာ ရှိနေသော်လည်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်နေ့တွင် ၁၀၀၀ ကျပ် (တစ်ဒေါ်လာ) ပေး၍
၈ နာရီကြာအထိ နေပူပြင်းပြင်းအောက်တွင် ကျောက်တုံးများကို ကောက်ယူသယ်ထမ်းခိုင်းနေကြပေသည်။
နံနက်စောစော ရွာများသို့လာရောက်သောာထရပ်ကားကြီးများဖြင့် အိပ်ချင်မပြေသေးသည့် ရိုဟင်ဂျာ ယောင်္ကျားကလေးများကို တင်ဆောင်သွားကာ မြစ်ကမ်းနံဘေးသို့ ဖြန့်ကျက်နေရာချပေးကြသည်။
“ တွေ့လား၊ သူတို့က အလုပ်လုပ်လိုချင်ကြတာပါ ” ဟု လေးမိုင်၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလှမိုးက ဆိုသည်။
ထိုနေ့ နေ့လည်ပိုင်းလောက်တွင် သူသည် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းခံရသော ကလေးငယ်များအား သူ၏ရုံးသို့ခေါ်ယူခဲ့သည်။ AP ၏ လုံခြုံရေးအတွက်ဟု သူကဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မိမိတို့အား မေးမြန်းဖြေကြားသည်များကို ပြန်လည်ပြောပြရန် ၄င်းက ခြိမ်းခြောက်တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကလေးငယ်များက ဆိုသည်။
ထိုကလေးငယ်များထဲတွင် အဏ္ဏ၀ါ စာဒတ် ဆိုသော အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် ကျောက်သယ်သူလည်း ပါဝင်သည်။ နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ နေ၀င်ချိန်အထိ သူ၏ အမွှာအစ်ကို နှင့် အခြားသော ကောင်လေး ၅၊ ၆ ယောက် နှင့်အတူ မြစ်ထဲမှ ကျောက်တုံးများအား တောင်ကုန်းပေါ်သို့ သယ်ပို့ရသော အလုပ်ကြမ်းကို လုပ်ဆောင်ရသည်။ သူတို့မှာ ကလေးငယ်များ ဆိုသည်ထက် မြီးကောင်ပေါက်များကဲ့သို့ ထင်မြင်စရာဖြစ်နေကြသည်။ သူတို့ထံ ရယ်မောခြင်း မရှိ။ သူတို့၏ ခြေလှမ်းတိုင်းသည် ကြမ်းတမ်းမာကြောပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူတို့၏ခွန်အားကိုလည်း တစ်ရွေးသားမှ အထိခိုက်မခံကြပေ။
အဏ္ဏ၀ါသည် ပင်ပန်းနေသည့်တိုင် အလုပ်ကို ခပ်သွက်သွက်လုပ်ကိုင်သည်။ သူ့သူငယ်ချင်းများကိုပင် ပုံးများ သယ်ကူလိုက်သေး၏။ ကလေးငယ်များအဖို့ ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းသည့်အလုပ်ဖြစ်သော်လည်း ၄င်းတို့နှင့်၎င်းတို့မိသားစု၏ စားသောက်ရေးအတွက် အထောက်အကူရစေသည်။ ဥရောပ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး နှင့် အရပ်ဖက်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန (European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department) မှထုတ်ပြန်ခဲ့သော ယမန်နှစ်စာရင်းအရ နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး အာဟာရချို့တဲ့မှုနှုန်းကို အများဆုံးတွေ့ရသည်မှာ ထိုဒေသပင်ဖြစ်သည်။ ထိုချို့တဲ့မှုသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ ပြင်းထန်သည့်ဆိုးကျိုး သက်ရောက်စေပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ အကြီးအကျယ်ကန့်သတ်ခံထားရသည်။ ပစ်ပယ်ခံနေရာများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးမှု မရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များသည် မည်သသည့်ရောဂါမဆို အလွယ်တကူ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိနေသည် ဟု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ယင်းဒေသ၌ ၁၅ နှစ်ကြာ တာဝန်ယူလာသူ နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ (Doctors Without Borders) ၏ ဒုဦးစီးမှူး ဗစ်ကီ ဟော့ကင်းစ် (Vickie Hawkins) က ဆိုသည်။
အကယ်၍ ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်များသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဖြင့် ကြုံတွေ့ရပါက သူတို့သည် ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း အလျဉ်းမရှိကြပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏မိသားစုသည် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှတောင်းဆိုသော လာဘ်ငွေများအား မပေးနိုင်ကြသလို၊ စစ်တွေသို့ကူးသန်းသွားလာခွင့်ကိုလည်း ပိတ်ပင်ခံထားရ၍ဖြစ်သည်။
အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ် မုဟမ္မဒ် သွိုင်ယုဗ် (Mohamad Toyoob)သည် ဆေးဝါးကုသခွင့်ကို ရရှိခဲ့သော်လည်း ဆရာဝန်များညွှန်ကြားထားသော ခွဲစိပ်မှုကိုတော့ မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ။ ကလေးငယ်သည် ရှပ်အင်္ကျီကို မ,တင်လိုက်ပြီး သူ့ဝမ်းဗိုက်ညာဘက်ခြမ်းကို ဖိနှိပ်ပြကာ၊ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်ကပင် ထိုနေရာ၌ စူးစူးရှရှ နာကျင်နေလေ့ရှိကြောင်းကို “ ဘာဖြစ်မှန်း ကျွန်တော် မသိဘူး။ အထဲမှာ တစ်ခုခုရှိနေသလို ခံစားနေရတာပဲ ” ဟု သူက ပြောပြသည်။ သူမှသိမ်းဆည်းထားသော ဆေးစစ်တမ်းတစ်ခုတွင် ၀မ်းဗိုက်တွင်းအစိုင်အခဲ ဟုသာရေးသားထားပြီး မေးခွန်းသင်္ကေတများစွာ ခြစ်ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ မုဟမ္မဒ်ပြသခဲ့သော ဆရာဝန်များသည် ဆေးကိရိယာမပြည့်စုံသည့် အစိုးရဆေးရုံမှဖြစ်ပြီး၊ အသက်ကယ် ခွဲစိတ်ကုသမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိကြပေ။ ထိုခွဲစိတ်မှုအား ပြုလုပ်နိုင်ရန် သူသည် သွားလာရေးကန့်သတ်ထားသည့် စစ်တွေမြို့ သို့မဟုတ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့သွားရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူ့မိသားစုက လာဘ်ငွေ တနင့်တပိုးကို ပေးဆောင်နိုင်ပါက သူသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ထွက်သွားနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ဌာနီပြန်လာရန်မူ လွယ်ကူမည် မဟုတ်တော့ပေ။
အခြားအခက်အခဲတစ်ခုမှာ ငွေကြေးပင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ့မိသားစုထံ၌ သူ၏ ကျန်းမာရေးစားရိတ်နေနေသာသာ ခွဲစိတ်ကုသရန်အတွက်ပင် ငွေကြေး မလုံလောက်။ သူသည် အိတ်အတွင်းသို့လက်နှိုက်ကာ အနီ၊ ပန်းရောင်၊ အ၀ါ နှင့် အပြာနုရောင် ဆေးလုံးလေးများပါရှိသော ပလစ်စတစ်အိတ်ငယ်လေး နှစ်ခုကို ထုတ်ယူလိုက်သည်။ ၄င်းသည် တစ်ရက်စာဖြစ်၍ ဆေးဖိုး ၂၀၀ ကျပ် (ဆင့် ၂၀) စာမျှသာ ရှိ၏။ ထိုပိုက်ဆံအားရရှိရန် မုဟမ္မဒ်သည် ရွာမှ အခြားကလေးငယ်များနှင့်အတူ မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် ကျောက်တုံးများကို ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ ထမ်းနေရရှာသည်။ ရံဖန်ရံခါ ထိုပင်ပန်းမှုများကြောင့် နာကျင်မှုပိုမို ဆိုးရွားလာသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“ ကျွန်တော့်အဖေဟာ အကြမ်းဖက်မှုများအပြီးမှာ အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်။ သူ အလုပ်လုပ်နေတုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကရုစိုက်ဖို့သာ ရှိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ ” ။
** အယ်ဒီတာမှတ်ချက် **
ဤအကြောင်းသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်မှလွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ကာလရှည်ထီးတည်းရှိနေခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တံခါးဖွင့်မှု နှင့် ဖြစ်စဉ် အပြောင်းအလဲရှိမရှိကို AP သတင်းဌာနက တစ်နှစ်ပတ်လုံး သုံးသပ်ဖော်ပြချက်ဇာတ်လမ်းရှည် “ ပြောင်းလဲမှု၏ ပုံတူကားချပ် ” (Potraits of Change) မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
AP သတင်းဌာတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါးရှင် ROBIN McDOWELL၏ Rohingya kids in Myanmar: hard labor, bleak lives ဆောင်းပါးကို ‘မင်းသိုက်’ ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
This entry was posted on October 24, 2013 at 11:27 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.